त्यो दिन केके भएको थियो भागरथीसंगै एउटै स्कुलमा पढ्ने साथीले दिए यस्तो बयान – नेपाली सूर्य
त्यो दिन केके भएको थियो भागरथीसंगै एउटै स्कुलमा पढ्ने साथीले दिए यस्तो बयान
February 16, 2021 Nepali SuryaLeaveaComment on त्यो दिन केके भएको थियो भागरथीसंगै एउटै स्कुलमा पढ्ने साथीले दिए यस्तो बयान
बैतडी। बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका—७ बगौराका भानदेव भट्ट यसैपालि भा’गरथी पढ्ने विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्ना भएका हुन्। उनको घरबाट १५ मिनेट जति हिँ’डेपछि भा’गरथीकै घर हुँदै उनी विद्यालय पुग्छन्। त्यस दिन विद्यालयको पो’साक नलगाएका उनलाई शिक्षकले आ’उट ड्रेसमा आउन पाइँदैन भने। कपाल पनि लामो भएको छ का’टेर आउनू भने। ड्रे’स पनि सि’लाउनू भनेपछि उनी टि’फिन टा’इम सकिनेबित्तिकै विद्यालयबाट निस्के। भा’गरथी कक्षा १२ मा व्य’वस्थापन संकायकी विद्यार्थी थिइन्।
उनको टि’फिन टा’इममा पनि पढाइ हुन्थ्यो र त्यसपछि बि’दा हुन्थ्यो। भा’नदेव विद्यालयबाट नि’स्केपछि खो’चलेक बजारमा रहेको सै’लुनमा छि’रे। सै’लुन विद्यालयबाट पाँच मिनेटको पै’दल दूरीमा पर्छ। उनीसँगै जा’डिकोटका त’र्कराज भट्ट र पौडाका ली’लाधर भट्ट पनि सै’लुनमा पुगे। त्यतिबेला भागरथी र यी तीनै जनाको खो’चलेकमा भेट भयो। भागरथी ले कतिबेला जाने हो ? भनेर सो’धी। हामीले कपाल का’टेर आउँछौं भन्यौं। उसले ल त्यसो भए तिमीहरू आउँदै गर्नु, म जान्छु भनी र ऊ हिँडी’, भा’नदेवले स्म’रण गरे।
भा’नदेवलाई त्यसै दिनको प’छुतो छ। ‘सायद त्यो दिन सँगै आएको भए यस्तो घ’टना हुन्थेन कि ?’, उनले भने। यी सबैको घर आउने बाटो भनेको भा’गरथीको ह’त्या भएको स्था’न ल’वलेक वन हो। ल’वलेक वन क्षेत्र स’किनेबित्तिकै फ’रकफरक गाउँ जाने बाटो आउँछन्। तर भा’नदेव भने भा’गरथीको घर हुँदै आफ्नो घर जा’नुपथ्र्यो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा शिवराज भट्टले लेखेका छन्।
सञ्चारकर्मीको एक हूल शनिबार भागरथी भट्टको घर जाँदै थियो । खोचलेक बजारबाट चडेपानी जाने सडक पस्नै लाग्दा एक व्यापारीले पसलबाटै सोधे, ‘तपाईंहरु पनि त्यहीँ जाँदै हुनुहुन्छ होला है ?’ हूलबाट जवाफको अपेक्षा नै नगरी उनी फेरि बोले, ‘कतिपटक जाँदै हुनुहुन्छ हो तपाईंहरु ? छोरीको घटना सुनाउँदा सुनाउँदा भागरथीकी आमा झन् हैरान भइसकिन् । यसरी हूलका हूल घर पुगेका मानिसलाई ही कुरा दोहोर्याएर भन्नु पर्दा आमालाई कति पीडा थपिएको होला भनने अनुमान त्यहाँ जानेले गरेका होलान् ?’
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका गाउँपालिका–७ चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको गत माघ २२ गते शव फेला परेको थियो । शनिबार उनको घरतर्फ जाँदै गरेकाहरु तीन पसलेको कुरा नसुनेझैँ गरी अघि बढे । १५ मिनेटको गाडी यात्रापछि त्यहाँ पुग्दा अघि नै अर्को समूह त्यहाँ पुगिसकेको देखियो । विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य दामोदर भण्डारीलगायत नेता कायर्कर्ताको समूह भागरथीकी आमा द्रोपतीसँग प्रश्न सोधिरहेको थियो । द्रोपतीले सकिनसकी घटनावृत्तान्त बताइरहेकी थिइन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
भागीरथीको यी युवकहरु संग अन्तिम पटक यस्तो अनुरोध
बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका—७ बगौराका भानदेव भट्ट यसैपालि भागरथी पढ्ने विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्ना भएका हुन्। उनको घरबाट १५ मिनेट जति हिँडेपछि भागरथीकै घर हुँदै उनी विद्यालय पुग्छन्। त्यस दिन विद्यालयको पोसाक नलगाएका उनलाई शिक्षकले आउट ड्रेसमा आउन पाइँदैन भने। कपाल पनि लामो भएको छ का’टेर आउनू भने। ड्रेस पनि सिलाउनू भनेपछि उनी टिफिन टाइम सकिनेबित्तिकै विद्यालयबाट निस्के। भागरथी कक्षा १२ मा व्यवस्थापन संकायकी विद्यार्थी थिइन्। उनको टिफिन टाइममा पनि पढाइ हुन्थ्यो र त्यसपछि बिदा हुन्थ्यो।
भानदेव विद्यालयबाट निस्केपछि खोचलेक बजारमा रहेको सैलुनमा छिरे। सैलुन विद्यालयबाट पाँच मिनेटको पैदल दूरीमा पर्छ। उनीसँगै जाडिकोटका तर्कराज भट्ट र पौडाका लीलाधर भट्ट पनि सैलुनमा पुगे। त्यतिबेला भागरथी र यी तीनै जनाको खोचलेकमा भेट भयो। ‘भागरथीले कतिबेला जाने हो ? भनेर सोधी। हामीले कपाल का’टेर आउँछौं भन्यौं। उसले ल त्यसो भए तिमीहरू आउँदै गर्नु, म जान्छु भनी र ऊ हिँडी’, भानदेवले स्मरण गरे।
लामो दुरी र छोटो दुरीका सवारी साधन भदौ मसान्तदेखि चलाउने सरकारको निर्णय
कोरोनाको डरले एक व्यक्ति तीन महिनादेखि विमानस्थलमा लुकेर बसे। कहाँबाट आएका थिए ?